डडेल्धुरा, भदौ १२–डा.गोविन्द केसी यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा छन् । बुधबार साँझ डडेल्धुरा पुगेका चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आएका डा. केसीले बिहीबार डडेल्धुरा अस्पतालको अवलोकन गरेका छन् ।
उनले बुधवार डोटी जिल्ला अस्पतालको अवलोकन गरेका थिए । एक्लै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको अवलोकनमा निस्किएका डा. केसीले डडेल्धुरामा केही दिन बिताउने छन् ।
आफू सुदूर पहाड आउनुको कारण भने उनले बताएका छैनन । यद्यपि आफू पर्यटकका रुपमा सुदूरपश्चिम आएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । ‘म आज पर्यटकका रुपमा यहाँ आएको हुँ।’ उनले भने,‘डडेल्धुरा राम्रो लाग्यो। अबका केही दिन यतै बिताउँछु होला ।’
उनी एक काँधमा झोला भेरेर बजारबाट हिँड्दै एक्लै अस्पतालसम्म पुगेका थिए । अस्पताल पुग्दा उनले अस्पतालको बस्तुस्थिति, बिरामीहरुको अवस्था नियालेको र सामान्य रुपमा यहाँको जनस्वास्थ्यको सवालमा कुराकानी गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।
‘उहाँले अस्पतालको बस्तुस्थिति, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियाल्नुभयो,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा जनशक्ति के कति छ? त्यसको बारेमा पनि केही सामान्य जानकारी उहाँले लिनुभयो। त्यसबाहेक अन्य कुरा केही भएन ।’
डा. केसी लामो समयदेखि चिकित्साक्षेत्रको सुधारको माग गर्दै संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । उनले आफ्नो संघर्षका क्रममा दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनले सुदूरपश्चिमको डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
१५औँ अनशन तोड्दा सरकारसँग १० साउन २०७५ मा ‘डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन’ गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि ‘एक महिनाभित्र टोली गठन गर्ने’ भनिएको थियो । यो बुँदा एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन् ।